Taliban mitantana ny Emirates Islamika any Afghanistan dia tia ny vehivavy sy ny amnistia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Taliban mitantana ny Emirates Islamika any Afghanistan dia tia ny vehivavy sy ny amnistia
Vaovao Mafana Afghanistan • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Konferansa ho an'ny mpanao gazety Taliban
Miseho ny tena tantara.
Ny komandy Taliban A'dead 'dia mandray fivoriana any Kabul, manome toky fa ho voaro ny dokotera, ny mpandraharaha.
Nilaza ihany koa ny mpitondra tenin'ny Taliban tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety fa hanome antoka ny zon'ny vehivavy eo ambanin'ny fetra 'silamo' taorian'ny fanjanahana an'i Afghanistan ny governemanta vaovao.
Nanambara famotsoran-keloka faobe ho an'ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta Afghanistan ny Taliban ary niantso azy ireo hiverina hiasa.
Tonga tao anatin'ny roa andro ny antso taorian'ny nidiran'ny mpiady Taliban tao amin'ny lapan'ny filoham-pirenena ary nanambara ny ady tany Afghanistan.
Ny Taliban dia voalaza fa mbola mifampiraharaha amin'ny fifanarahana fanolorana ara-dalàna amin'ireo mpitondra politika ao amin'ny firenena.
Tongasoa eto amin'ny Taliban sariaka mitondra ny Emira Islamika vaovao any Afghanistan!
Mandritra izany fotoana izany dia nilaza i Enamullah Samangani, mpikambana ao amin'ny vaomiera kolontsain'ny Taliban, fa tokony hiditra amin'ny governemanta vaovao ny vehivavy. Niantso ny “lafiny rehetra” koa izy hanatevin-daharana ny governemanta vaovao.
Nandritra izany fotoana izany dia nanao bizina ny fivarotana tao Kabul nivarotra burqas ary vitsy ny vehivavy hita teny amin'ny araben'i Kabul tamin'ny talata, araka ny tatitra.
Nandritra ny fivorian'ny filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana ny alatsinainy teo momba ny krizy any Afghanistan, nilaza ny masoivoho mikambana ao amin'ny firenena Ghulam Isaczai fa ny mponina ao Kabul dia nitatitra fa ny mpikambana ao amin'ny Taliban dia nanomboka ny fikarohana isan-trano nitady olona izay niara-niasa tamin'ny governemanta.
Taliban Fighters no naka an'i Kabul
Nilaza ihany koa izy fa nahazo tatitra momba ny famonoana olona sy fandrobana lasibatra tao an-drenivohitra
Ny filoham-pirenena amerikana Joe Biden, tao amin'ny lahateny tamin'ny fahitalavitra avy amin'ny East Room of the White House ny Alatsinainy tolakandro, dia nilaza fa "Mijoro marina ao ambadiky ny fanapaha-kevitro" hisintona ny tafika amerikana hivoaka avy ao Afghanistan ary tsy "hihemotra amin'ny anjara andraikiko amin'ny aiza no misy antsika ankehitriny. ”
Niaiky i Biden fa tsy nampoizin'ny fitantanan-draharahany ny firodanan'ny governemanta haingana manoloana ny fanafihan'ny Taliban. Ny mpitarika amerikana demokratika dia nanamarika fa ny fifanarahana fisintahana dia nifampiraharaha tamin'ny filoha teo aloha Donald Trump.
Manoloana an'ity Reporter CNN be herim-po ity:
Eny an-dalamben'i Kabul anio- mahatsapa fa manatri-maso ny tantara isika pic.twitter.com/wcVKzbT6oJ
- Clarissa Ward (@clarissaward) Aogositra 16, 2021
Bitsika iray no mamintina ny tahotra:
Fantatrao ve ny tahotry ny vehivavy ao Afghanistan ankehitriny? Eny, afaka maka sary sy maka sary miaraka amin'izy ireo ianao. Saingy tsy mahazo miasa akory ny vehivavy Afgana.
Raha ny Taliban manara-dalàna ny fanandevozana, fanolanana, fanambadiana zaza (fametavetana), hanaiky izany ve ianao? Inona ny fetranao raha ny amin'ny fiarovana ny zon'olombelona? Tsy mikasa ny hijoro hanohitra ny fundamentalista sy ny fahavalon'ny olombelona mihitsy ve ianao?
Courtesy: Ny tsipika media
Ny Tombo-kase Vaovao an'ny Emira Islamika any Afghanistan